Safarka Jasiiradaha Cook | Wararka Safarka
Safarka Jasiiradaha Cook
Mariela Carril | | Guides, Jasiiradaha
Jasiirado qurux badan ayaa adduunka ka jira! Gaar ahaan Koonfurta Baasifigga, dhul badan oo ka mid ah sheekooyinka Jack London ee aan aqriyay ilmo yar. Halkan, qaybtan adduunka ka mid ah, waxaa tusaale ahaan ka mid ah Cook Islands.
Waa koox yar oo jasiirado ah u dhow New Zealand ee muuqaalka cagaaran iyo cagaarka ah, biyo diiran iyo dhaqanka Polynesia. Ma ogaanay iyaga?
2 Dalxiiska jasiiradaha Cook
Sidii aan nidhi, waa a jasiiradaha 15 jasiiradood oo baaxaddiisu dhan tahay 240 kiiloomitir oo laba jibbaaran. Jasiiradaha Cook ku xiran yihiin New Zealand, dalkan wuxuu la macaamilaa difaaciisa iyo arrimihiisa caalamiga ah, in kastoo in muddo ahba ay hadda ka madax bannaan yihiin. Gegada diyaaradaha caalamiga ah iyo dadka ugu badan waxay ku sugan yihiin jasiiradda Rarotonga waana jasiirado ku nool hareeraha dhoofinta miraha, bangiyada dibedda, beero diirinta iyo dalxiiska.
Waxaa loogu yeeraa Cook ka dib naakhuudihii Ingiriiska, ee caanka ahaa James Cook, oo markii ugu horreysay yimid 1773, inkasta oo magaca loo bixiyay qarnigii xigay. Dadkii ugu horeeyey waxay ahaayeen Polynesians ka Tahiti Laakiin waxay qaadatay reer yurub inyar in ay yimaadaan oo ay dejiyaan maxaa yeelay qaar badan baa laayay dadka wadanka u dhashay. Ma ahayn ilaa 20-yadii qarnigii XNUMXaad in Masiixiyiinta qaar nasiib wacan ay heleen, in kasta oo qarnigaas jasiiraduhu a joogsi caan ah oo loo yaqaan whalers tan iyo markii la siiyay biyo, cunto iyo alwaax.
Sannadkii 1888-kii Ingiriiska ayaa u beddelay a maxmiyad, ka hor cabsida laga qabo in Faransiisku qabsado maadaama ay horeba ugu jirtay Tahiti. Markii la gaaro 1900 jasiiradaha waxaa la wareegay Boqortooyadii Ingiriiska, iyada oo ahayd ballaadhintii deegaannadii New Zealand. Dagaalkii Labaad Kadib, 1949, Muwaadiniintii Ingiriiska ee Jasiiradaha Cook Islands waxay noqdeen muwaadiniin New Zealand ah.
Jasiiradaha 'Cook Islands' waxay markaa ku yaalliin Koonfurta Badweynta Baasifigga, inta udhaxeysa American Samoa iyo French Polynesia. Waa maxay goob qurux badan! Waxay u kala baxaan kooxo kala duwan, kuwa koonfureed, kuwa woqooyi iyo xeebta meeraha. Waxaa lagu aasaasay dhaqdhaqaaqa volcanic iyo jasiiradaha waqooyiga ayaa ah kooxda ugu da'da weyn. Cimiladu waa kulayl iyo laga bilaabo Maarso ilaa Diseembar waxay ku socdaan dariiqa duufaanka.
Runtu waxay tahay inay yihiin jasiirado wax kasta ka fog taasina waxay khatar ku tahay dhaqaalahooda maadaama ay inbadan ku tiirsan yihiin banaanka. Intaas waxaa sii dheer, cimiladu ma caawinayso sidoo kale maadaama ay ku xiran yihiin cimilo badan oo xun. Tan iyo markii 90-meeyadii ay waxoogaa hagaageen maxaa yeelay waxay noqdeen meelaha canshuurta laga qaado.
Dalxiiska jasiiradaha Cook
Waxaad ku timid jasiiradaha diyaarad Air New Zeland, Virgin Australia ama Jetstar. Waxaa jira duulimaadyo badan oo ka yimaada Auckland iyo Australia kuwaas oo sii mara caasimada New Zealand. Waxa kale oo aad ka iman kartaa magaalada Los Angeles ama magaalooyinka kale ee ay ka shaqayso shirkadda diyaaradaha ee New Zealand. Kadib, jasiirad ilaa jasiirad waxaad ka raaci kartaa doomo ama diyaarad Hawada Rarotonga.
Jasiiradda leh garoonka diyaaradaha caalamiga ah waa halka laga soo galo Cook: Jasiiradda Rarotonga. Waa wareega kaliya 32 kiiloomitir waxaana si dhaqso leh ugu safri karaa 40 daqiiqo baabuur. Hase yeeshe, waxay leedahay muuqaal qurxoon oo kaladuwan waxayna ku urursan tahay tiro wanaagsan oo makhaayado ah, hoy iyo nashaadaad.
Jasiirad kale oo qurux badan ayaa ah - Aitutaki, el Jannada dhulka. Kaliya waxay 50 daqiiqo u jirtaa Rarotonga, waxay u egtahay saddexagal iyo waa dhagax dixeed oo leh laamo gudaha ah oo turquoise ah oo lagu dhejiyay jasiirado yaryar. Waa jasiiradda labaad ee loogu booqashada badan yahay Cooks oo badanaa waa safarka Malabka.
Waad tagi kartaa kaaxayaasha, qorrax qorraxda xeeb ciid wanaagsan, kitesurf, kalluumeysi, snorkel iyo quusin, raaci kartaa mootada ama baaskiil ama toos ayaad halkaan u joogi kartaa wax walbana waad ku dhowdahay waqti dheer.
Atiu waa jasiirad jirta in ka badan sideed milyan oo sano. Waa hawdka iyo jasiiradda kulaylaha kala badh cabirka Rarotonga. Halkan waa dabiicad, mana ahan ilbaxnimo. Kaliya dhowr makhaayadood shanta tuulo ee bartamaha ku yaal. Kafee dabiici ah ayaa koray waxaana jira jawi aad u hooseeya.
Sideed ku tagtaa Duulimaad daqiiqad ah oo ka yimid Rarotonga ama Aitutaki. Laga soo bilaabo jasiiradda ugu horreysa waxaa jira saddex duulimaad usbuucii, Sabtida, Isniinta iyo Arbacada. Laga bilaabo tan labaad waxaa sidoo kale jira seddex duulimaad laakiin Jimcaha, Isniinta iyo Arbacada oo loo maro Air Rarotonga.
Mangaia Waa jasiirad ay qasab tahay inay ahaato 18 milyan oo sano, sidaas darteed waa jasiiradda ugu faca weyn Baasifigga. Waa jasiiradda labaad ee ugu weyn Cook Island waana daqiiqad 40 duulimaad ah oo ka timid Rarotonga. Waa qurux qurux badan oo dabiici ah, oo leh buuro dhuxul dhagax ah, dhirta cagaaran, xeebaha leh biyaha cad, boholaha xiisaha leh, qorrax dhaca quruxda badan, hadhaagii doontii burburtay 1904 iyo suuqyo maxalli ah oo midabo badan leh.
La Jasiiradda Mauke, "Meesha qalbigaygu nasto," waa a Jasiiradda beerta halkaas oo ubaxyo iyo beero badani ku bataan. Halkan waa inaad booqataa Godka Badda ee ku yaal xeebta bari, kaas oo saqafkiisa ay qorraxdu ka marto oo ay siiso bilic buluug ah biyaha. Waxaa kaliya lagu heli karaa mowjadaha hoose. Waxaa sidoo kale jira haraadiga markab burburay, Te Kou Maru, oo ah markab degay sanadkii 2010.
La Jasiiradda Mitiaro waa jasiirad qurux badan oo gaar ah, leh barkado dabiici ah iyo godad dhulka hoostiisas. Mar hadday jasiiraddan yari ahayd fulkaano laakiin waxay ku degtay badda oo waxay noqotay a atoll dhuxul. Qaab dhismeedkaas juqraafiyeed wuxuu siiyay nasasho qurux badan oo ku habboon in la baaro. Waxaa ku nool 200 qof, aad u kulul, waxaad ku timaadaa diyaarad guud ahaan waxaad kireysan kartaa xirmo hoy iyo dalxiisyo ah.
Kuwani waa jasiiradaha ugu caansan ee loo yaqaan 'Cook Islands', laakiin dabcan waxaa jira jasiiradaha kale: Rakahanga, Manihiki, Pukapuka, Palmerston, Penrhyn, Takutea, Nassau, Suwarrow, Manuae... waa wicitaanada jasiiradaha dibadda, soo jiidasho leh, wilder iyo fog oo aan la daboolin. Wadar ahaan waxaa jira siddeed jasiiradood, toddobo ka tirsan kooxda koonfurta iyo toddobo kale oo ku yaal woqooyiga. Waxaa jira duulimaadyo maxalli ah oo qaar yimaada qaarna maraakiib kale ayaa yimaada.
Iyagu waa jasiirado aan aad u badnayn sidaa darteed haddii aad rabto inaad ka fogaato dadka waalan ee murugsan waa inaad halkaan timaaddaa, ilaa fog Badweynta Koonfurta Baasifigga. Ugu dambeyntii, ka hoyga jasiiradaha CookDalxiis ahaan, way kala duwan tahay badankoodna waxay ku yaalliin biyaha geeskiisa. Waxaa jira dalxiisyo, villa qaali ah, hudheelo, guri kiro ah. Waad u safri kartaa qoys ahaan, guryaha leh jikooyin iyo wax walba, ama lamaane waxaad ku safri kartaa meelaha raaxada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Jasiiradaha » Safarka Jasiiradaha Cook
7 tabaha loogu talagalay safarada gawaarida xilliga qaboobaha